Isilumkiso esingxamisekileyo nguNobhala oHloniphekileyo we-UNWTO uFrancesco Frangialli
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Isilumkiso esingxamisekileyo nguNobhala oHloniphekileyo we-UNWTO uFrancesco Frangialli
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • I-WTN
Bobabini owayenguNobhala-Jikelele we-UNWTO uFrancesco Frangialli kunye noDkt. Taleb Rifai babenele ngokwaneleyo.
Ileta yamva nje yosiba yowayesakuba nguNobhala-Jikelele uthetha malunga nokukopela, uvavanyo lukaStalinist kunye nenqaku apho nobulungisa bube bungenabulungisa.
UFrancesco Frangialli, u UNobhala-Jikelele oHloniphekileyo we-UNWTO nowayesakuba yintloko yombutho wasabela Ileta kaZurab Pololikashvili eya kuwo onke amaZwe angamaLungu ukusuka kwiveki ephelile.
UFrancesco Frangialli usebenze njengoNobhala-Jikelele woMbutho weZizwe eziManyeneyo woKhenketho lweHlabathi ukusuka kwi-1997 ukuya kwi-2009 kwaye ubalwa njengomnye wabantu abahlonitshwa kakhulu kwishishini lehlabathi lokuhamba kunye nokhenketho.
Eyona mpumelelo kaFrangialli njengonobhala-jikelele iquka “ukwenziwa kwenkqubo eyamkelwa lilizwe jikelele yokulinganisa impembelelo kukhenketho kuqoqosho lwesizwe nokwamkelwa kweKhowudi yeHlabathi yeeNqobo zokuziphatha kuKhenketho ukukhuthaza ukhenketho olunenkathalo noluzinzileyo.
Oku kunyhashwa kwale khowudi yemigaqo yokuziphatha yeyona nto ibangela ukuba owayesakuba yinkosi ye-UNWTO athethe ngamandla kuthotho lweeleta ezivulelekileyo ngokuchasene nenkokeli ekhoyo yombutho.
UMnu Francesco Frangialli uxelela uZurab Pololikashvili kwimpendulo yakhe evulekileyo yeleta:
ABameli abekekileyo baMazwe angamaLungu oMbutho weHlabathi wezoKhenketho,
Ileta yokuqala evuliweyo: i-WTN yesidima kuNyulo lwe-UNWTO
Ileta yesiBini eVulekileyo eya kuMazwe angamaLungu e-UNWTO kwingxelo yeGosa leNdlela yokuziphatha kwinkcubeko yolawulo kunye nezenzo kuMbutho
Ndibhalela wena kwisikhundla sam njengowayesakuba nguNobhala Jikelele woMbutho wezoKhenketho weHlabathi. Kwabo bangawaziyo amaxesha angaphambili, bendinguSekela Nobhala Jikelele ukusuka ku-1990 ukuya ku-1996, uNobhala-Jikelele. isikhangiso sithuba ngo-1996-1997, kunye noNobhala-Jikelele ukususela ngo-1998 ukuya ku-2009. Ngexesha lika-2001-2003, ndikhokele ukuguqulwa kweZiko lethu libe yi-arhente ekhethekileyo yeZizwe eziManyeneyo.
Njengoko ndiphethe i-Ofisi kaNobhala kunyanzelisa, ngokokubona kwam, ukuzibamba, ngakumbi ngeli xesha uMbutho ukwinkqubo yonyulo yokutyumba uNobhala-Jikelele wawo kwiminyaka emine ezayo. Kungenxa yoko le nto, nangona ndabelana ngezimvo ezininzi ezichazwe kwesi sicatshulwa, andizange ndiyisayine ileta evulekileyo ethunyelwe liqela lamagosa asemthethweni akwinqanaba eliphezulu.
Kodwa ileta yamva nje ejikelezisiweyo iphendula amaLungu nguNobhala Jikelele okhoyo kunye nezityholo ezingezizo eziqulathwe kuyo ziyandinyanzela ukuba ndiphendule esidlangalaleni kumanqaku amabini.
Okokuqala, ukuba ijolise kwixesha endandiphethe ngalo, andinakuyamkela ingxelo yokuba "Kwenziwe izitenxo kwaye amaninzi amaLungu abalulekileyo arhoxa, imeko leyo uMbutho ubuzama ukuyilungisa ukusukela ngelo xesha".
Xa u bhe kisela "izitenxo", umntu akanakuhlala engacacanga. Zonke izitenxo kufuneka zichongwe. Kufuneka kuthiwe xa yenzeka, ngubani owayenoxanduva lwayo, kwaye leliphi ilizwe elishiye ngenxa yoko.
Yinto kanye ebizwa ngokuba lulingo lukaStalin
Xa ndandinguNobhala-Jikelele, akukho lizwe libalulekileyo lawushiyayo uMbutho.
Xa ndajoyina i-WTO njengoSekela-Nobhala Jikelele omncinci ku-Antonio Enriquez Savignac, uMbutho wawungekho ngokupheleleyo. Amazwe amaninzi akuMbindi Merika, njengeCosta Rica neHonduras, nakwelaseAsia-Pacific, njengeePhilippines, iThailand, iMalaysia, neOstreliya, aye emkile; iUnited States yayiza kulandela ngokukhawuleza. Ndikunye nomanduleli wam, kwaye, kamva, ngokuyalela ngokwam, siye saphumelela ukubuyisela umva loo mkhwa.
Xa ndishiya i-UNWTO ngo-2009, iZiko lalinamalungu angama-150. Onke amazwe aseAsia awayefudula emkile aye aphinda athelela, yaye amatsha kulo mmandla wehlabathi, obalulekileyo kushishino lokhenketho, ayefikile. Amazwe abalulekileyo anjengeSaudi Arabia, iCroatia, iSerbia, iUkraine, iKazakhstan, noMzantsi-Afrika, namanye amaninzi, aye athelela. ILatvia, iLithuania, iUnited Kingdom, iNorway, iOstreliya, neKhanada yayingaMalungu.
Ndandifumene ileta evela kurhulumente waseNew Zealand echaza injongo yakhe yokuthelela. Unobhala wezoRhwebo waseUnited States wayecebise ukuba kufuduke okufanayo kuMongameli wakhe. Xa ndifunda ileta kaNobhala-Jikelele, ndivuyiswa kukufunda ukuba abaphathi abakhoyo basebenzela “ukulungisa” ukungabikho kwamanye amazwe amakhulu. Ndiyaqaphela ukuba sele iphethe iminyaka emine kwaye akukho siphumo.
Ndiyabulela kwiminikelo evela kula mazwe "atyebileyo", kodwa kunye nolawulo oluluqilima, kunye nomda ongqongqo weendleko zabasebenzi, eziye zalahleka, i-UNWTO yayinandipha ngexesha lokuhamba kwam, i-surplus enkulu yemali, ivumela ukuxhasa ngemali inkqubo etyebileyo neyohlukeneyo yemisebenzi yexesha elizayo lohlahlo lwabiwo-mali luka-2010-2011. Ukuba "intsilelo enkulu yemali” ikhona okanye ikhona namhlanje, ayisuki ukusuka kweli xesha.
Okwesibini, andinakuvumelana nentelekelelo yokuba, ekubeni yamkelwa liBhunga, inkqubo yokutyunjwa komgqatswa kwisikhundla sikaNobhala-Jikelele yagqitywa yaze yaphunyezwa ngendlela echanekileyo, eselubala, nedemokhrasi. Yayingeyonto yolo hlobo.
Kunye nomntu owangena ezihlangwini zam njengoNobhala-Jikelele, uGqr. Taleb Rifai, kwaye ngaphandle kokuphazamisana nangayiphi na indlela kukhetho olwenziwayo, salumkisa ngexesha elifanelekileyo ngomngcipheko obandakanyekileyo kwisicwangciso samaxesha esicetywe ngumgqatswa kaNobhala-Jikelele saza samkelwa Ibhunga lesiGqeba kwiseshoni yalo ye-112 e-Tbilisi. Ukuba amazwi ethu ebeviwe, amathandabuzo ngoku okuchaphazela ukuba semthethweni kwenkqubo yonyulo ngekungekho.
Intlanganiso kwilizwe lasekhaya lomntu obambeleyo ngeli xesha xa amalungu amaninzi eBhunga engakwazi ukuhamba ngenxa yobhubhane kwaye xa uninzi lwawo lwalumelwe ngoonozakuzaku babo eGeorgia, lwazisa ngokucacileyo umkhethe.
IBhunga liphumeze ithayimthebhile eyenze ukuba kube nzima ukuba abo banokuba ngabagqatswa bazichaze, bafumane inkxaso koorhulumente babo, bacacise kwaye basasaze inkqubo yabo, kwaye bakhankase ngokuqhelekileyo. Esi sithintelo sexesha esingenasihlahla, kunye neemeko zococeko ezikhoyo kunye nexesha lokuphela konyaka, zithintele abantu abanokuba ngabagqatswa ukuba batyelele amazwe okuvota. Ukuba nonyulo olubanjelwe eMadrid bekwakuthanda uNobhala-Jikelele ophumayo, njengonozakuzaku wangaphambili eSpain. Konke oku kudityaniswe kwanika lowo uqeshwe kweso sithuba iadvanteji yokukhuphisana ngokungafanelekanga ngaphezu kwabo banokukhuphisana nabo.
Isizathu sexesha elifutshane elihlekisayo phakathi kweeseshoni ezimbini zeBhunga laliza kuba neseshoni ye-113 eMadrid kunye nomboniso obalulekileyo wokhenketho eSpain, iFITUR. Oku kwakufihla inyani kuMalungu, kuba kwakucacile kwasekuqaleni ukuba, ngenxa yobhubhane, iFITUR ayizukwenzeka njengoko bekucwangcisiwe ngoJanuwari. Njengoko kubonisiwe kwileta endiyibhale kunye noTaleb Rifai, imeko enzima yococeko bekufanele ikhokelele kwisisombululo esichaseneyo: ukubamba iseshoni yeBhunga ngokukhawuleza okukhulu, entwasahlobo njengesiqhelo, okanye ekuqaleni kweNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
Kwiimeko ezinjalo, ukuqhubela phambili umhla yayikukukhohlisa nje.
UNobhala-Jikelele ophumayo uyaphikisana kwileta yakhe ukuba inkqubo elandelwayo yayisemthethweni ngokungqongqo, kwaye iyawa "ngokwemigaqo yeBhunga elinoLawulo oluPhezulu ngokwalo".
Oku kuchanekile ngokupheleleyo. Kodwa ukuba semthethweni akwanelanga. Ekulawuleni inkqubo, unokuba semthethweni kunye nokuziphatha okubi.
Inkqubo yonyulo inokulandelwa ngokusemthethweni ngokuhambelana neMithetho, kodwa kwangaxeshanye ayinabulungisa kwaye ingalingani. Ekupheleni kosuku, hayi yokuziphatha.
Njengoko uSophocles wabhala:
"Kukho inqaku elingaphaya kokuba nobulungisa bube bubugwenxa".
Ndiyathemba ukuba iNdibano yeZizwe eziManyeneyo, kwisikhundla sayo “ilungu eliphezulu” ye-UNWTO, iya kwenza oko kuyimfuneko ukuze kuqinisekiswe unyulo olunobulungisa eMadrid kunye nokubuyela kulawulo olululo loMbutho.
Ndininqwenelela ukuhlala okuneziqhamo kunye nokumnandi eSpain.
Novemba 22nd, 2021
UNobhala-Jikelele oHloniphekileyo we-UNWTO